C/qaadir Dhaqane “Madaxweyne Farmaajo wuu lumiyay taageeradii shacabka, sida la moodayay iyo sida…” | Sagal Radio Services
C/qaadir Dhaqane “Madaxweyne Farmaajo wuu lumiyay taageeradii shacabka, sida la moodayay iyo sida…”
Sagal Radio Services • News Report • February 9, 2019
C/qaadir Xaaji Maxamuud (Dhaqane) oo horay u soo noqday Wasiir iyo Xildhibaan dowladdii KMG ayaa sheegay in waxyaabo badan oo laga filayay dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo sidii loo filayay aysan noqon, isagoo xusay inuu lumiyay taageeradii shacabka.
Wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayuu ku sheegay dhammaan balan-qaadyadii Madaxweyne Farmaajo ay noqdeen hal bacaad lagu lisay.
“Soomaalidu waxay tiraahdaa ‘la mood, noqonse weyday’, madaxweyne Farmaajo markii la dooranayay wuxuu heysatay shacbiyada faro badan, qof walbana wuxuu lahaa ‘Farmaajo ii geeya’ laakiin wixii oo idil hadda wuu lumiyay, sidii la moodayay iyo sida uu noqday waa kaaf iyo kala dheeri”ayuu yiri C/qaadir Xaaji Dhaqane.
Waxaa uu sheegay in labadii sano ee uu Madaxweyne Farmaajo xafiiska joogay ay faraha la gashay dhibaatooyin kala duwan, sida arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha.
“Waan ognahay sida uu noqday xiriirkii arrimaha dibadda Soomaaliya iyo sida ay hoos ugu dhacday siyaasaddii arrimaha dibadda gaar ahaan waddamada khaliijka, waxaa waddanka laga eryay Haysom oo ka socday xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay, suuqii siyaasadda arrimaha dibaddana wuu ka xirmay Soomaaliya. Dhanka gudahana, waxaan la soconnaa inuu ku fashilmay wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu wax hagaajin karo labada sano ee u harsan maamulkiisa, lagana doonayo inuu sameeyo dib u heshiisiin.
“Aniga ilama aha inuu sidaas sameynayo, laakiin 2-da sano ee u hartay wax wuu ku qaban karaa haddii uu wax qabad usoo jeesto isla markaana uu dhinac iska dhigo siyaasaddii gurracneyd ee ku dhisneyd aargoosiga oo uu dib u heshiisiin sameeyo”ayuu yiri C/qaadir Dhaqane.
Shalay ayaa waxaa Madaxweyne Farmaajo u buuxsantay labo sano, markii xilka loo doortay, waxaana dad badan is bar bar dhig ku sameynayeen labadii sano ee uu xafiiska joogay iyo wixii uu qabtay, inkastoo dad badan ay qabaan in balanqaadyadiisa xilligii ololaha doorashada aysan waxba ka dhaqan gelin.
Al-Shabaab oo sheegtay in Askar ka kala tirsan Milateriga iyo Booliska ku dishay Muqdisho
Faahfaahin ka soo baxaysa Suldaan lagu diley caawa Koofurta magaalada Gaalkacyo
Madaxweyne Farmaajo oo magacaabay Guddi qaabilsan Wada hadalada Somaliland (Akhriso Magacyada)